Lix calaamadood oo kuu ifinaya astaamaha lagu garto ka shakiga telefoonka (Phone Phobia) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Lix calaamadood oo kuu ifinaya astaamaha lagu garto ka shakiga telefoonka (Phone Phobia)
Telefoonka maanta wuxuu noqday shay nolosha ka mid ah oo aanan marnaba dadka qaar noloshooda kaga kaaftoomin.
Dad badan ayaa telefoonka u isticmaala arrimahooda ganacsi iyo la xiriirka ehelkooda, asxaabtooda iyo arrimo kale oo aanan marnaba qormo lagu soo koobi karin.
Si kasta oo ay ahaataba, qaar badan oo ka mid ah isticmaalayaasha telefoonka ayaa ka cabanaya cabsi iyo fir-fircooni la’aan kasoo wajahday ku hadalkiisa iyo adeegsigiisa.
Tusaale hadii aa usoo qaadano, marka uu telefoonkaaga soo dhaco, waxaad dareemeysaa cabsi iyo ka cararidda inaad qabato telefoonka qofka kusoo wacaya, ma ahan in soo wacaha aad neceb-tahay ama la-hadalkiisa aadan rabin, ee waxaad ma-marsiyo ka dhiganeysaa “Waa qaban doonnaa, laakiin hadda mashquul ayaan ahay” Qofkaan muxuu ii soo wacayaa? “Hadhoow ayaa ku celineysaa ee sug” iyo maanweeloyin kale oo aad naftaada u sheegeyso.
Hadaba bal sii aqri tusaalooyinka hoos ku qoran, si aad u fahamto waxa Phone Phobia uu yahay:-
1- Telefoonka kama jawaabeysid:
Iyadoo aan la ogeyn cidda kusoo waceeysa qofka uu yahay, waxaad horay ka dareemeysaa naxdin iyo cabsi islamarka telefoonka dhicidiisa aad maqasho, waxaa kusoo weeraraya su’aalo tiro badan sida:-
“Alla qof ayaa isoo wacaya! Muxuu iga rabaa, Aniga mashquul ayaan ahay, Maka qabtaa? Maya kama jawaabayo ee hadhoow ayaan ku celinayaa… Su’aalaha aad is-weydiineyso weey sii badanayaan ilaa telefoonka uu joojinayo codka dhicidda aad maqleeyso.
Markuu codka dhicidda telefoonka joogsado nafisaad iyo istiraaxo ayaa kuu bilaabanayo, laakiin cabsida iyo wal-walka waxay soo laabanayaan markii aad garowsato muhimada ay leedahay ku celinta qofki kusoo wacay.
2- Waxaa waqti kugu qaadanaya inaad soo wicihii ku celisid:
Waxay kuugu qaadaneysaa wax xoogaa waqti ah inaad ku celiso qofkii kusoo wacay, macnaha waxaa dhibsaneeysaa wicidda qofka iyo sugidda ilaa lagaa qabanaayo.
3- Badanaa Telefoonka codka ayaa ka xirtaa waxaadna saartaa “Silent”
Ka xirista codka ee telefoonkaaga ugama jeedid inaad iska ilaaliso dad si fowdo ah kuu soo wacaya, ee run ahaantii waxaad ugu talo gashay inaad iska indha-tirto cid walba oo ku soo waceeysa, iyo iska fogeynta codka dhicidda telefoonkaaga.
4- Liiska wicitaanka ku dhaafay “Missed calls” waxey ka badan-yihiin liiska qabashada “Received Calls”
Dhab ahaantii isticmaalka maalinlaha ee telefoonka, sida caadiga ah waxaad daremeysaa in telefoonada aad qabatay ay ka badan yihiin kuwa ku dhaafay, laakin dadka ka cabanaya cuqdada telefoonka waxaad arkeeysaa in liiska telefoonada dhaafay ay aad u badan yihiin, xaqiiqdi waxaaba laga yaabaa in liiska dhan uu yahay “Missed Calls”.
5- Fal celinta ehelkaaga, asxaabtaada iyo dadka aad wada shaqeysaan:
Ehelkaga iyo asxaabtaada ayaa had iyo jeer ka cabanaya in telefoonka aadan ka jawaabin, waaxaad isku dayeeysaa inaad ka cudur-daarato adigoo ku mar-marsiyoonaya waxyaaba aanan sal iyo raad laheyn, waxeyna naftaada dareemeysaa danbi, sababtoo ah waxaad ogtahay in cudur-daarka aad gudbineeyso uu been yahay xaqiiqdana ay tahay inaad had iyo jeer wicitankooda iska indha tirto.
6- Waxaad had iyo jeer doorbidaa fariin qoraaleedka “Text Message”
Dadka ka cabanaya “Phone Phobia” waxay goor-walba isku dayaan ineey diraan SMS ama fariin qoraaleed, sababtoo ah weey ka fududahay, weeyna ka waqti yar-tahay wicitaanka.
La soco qoraalo kale oo xiiso leh Insha Allaah
W/Q:- Mohamed Awil
Somalia Bombing and Ambush Kill at Least 13, Including Soldiers